Xubnaha Wasiirada ee Khayre uu Magacaabay Imisaa Xildhibaanno ah? | allsaaxo online
Xubnaha Wasiirada ee Khayre uu Magacaabay Imisaa Xildhibaanno ah?
Xubnaha Wasiirada ee maanta uu soo Magacaabay Ra’iisul Wasaare Kheyre Shan kamid ah lixda wasiir ee maanta uu ku dhawaaqay Ra’iisal Wasaaruhu waa xildhibaano ka tirsan Golaha shacabka.
Cabdullahi Goodax Barre oo loo magacaabay wasiirka wasaraada waxbarashada ayaa ah xubin kamid ah golaha shacabka Soomaaliya horey ayuu u soo noqday wasiir, xilkaan waxaa kaga horeyay Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo 26-kii bishii ee Luulyo xilka laga qaaday.
Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo lo magacaabay wasiirka Owqaafta iyo diinta Soomaaliya ayaa sidoo kale kamid ah xildhibanaad Golaha shacabka , waxaa uu ahaa wasiirka xanaada xoolaha , xilka maanta loo magacabayna waxaa uu ku noqonayaa wasiirka sadexaad ee wasaaradan qabta mudada ay jirto xukuumada Kheyre.
Xuseen Sheekh Maxamuud Xuseen badni oo loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha ayaa kamid ah sidoo kale xildhibnaad Golaha shacabka horey u soo noqday wasiir , waaxana xilkan baneeyay ninka maanta loo magacaabay wasiirka diinta iyo owqaafta.
Cabdullahi Bidhaan warsame oo loo magacaaby wasiirka Kaluumeysiga iyo Kheyraadka badda , waa xildhibaan horeyna u soo noqday wasir , waxaana xilkan kaga horeeyay Cabdiraxmaan Maxamed cabdi xaashi oo digreetadan looga qaaday.
Cabdulqaadir Shiikh Cali Baqdaadi oo noqday wasiiru Dowlaha Madaxtooyada ayaa isna kamid ah Golaha shacabka , xilkan waxaa kaga horeeyay Cabdiqaadir Macalin Nuur oo sidan loga qaady xilka.
Xukuumadda Kheyre ayaa Muuqata in ay siweyn ugu dhex milantay Golaha Shacabka, taasina waxa ay hoos udhigi kartaa isla xisaabtanka hayadaha Sharci dajinta iyo tan fulinta.
Shawaqar Ibraahim Cabdallah oo loo magcaabay wasiirk ku xigeenka Shaqad iyo Shaqaalaha ayaa waxaa xilkan kaga horeay Cabdi Casiis carmaan oo manata digteetada soo baxday looga qaady